Samsung Galaxy Note 8 ကိုသြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပွဲထုတ်မည် Androidsis
Samsung ၏ Galaxy Note 8 ကိုသြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပွဲထုတ်မည်
ဟိုဆေး Alfocea | | NOTICIAS, Samsung
နောက်ဆုံးတွင် Samsung ၏ Galaxy Note 8 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်မည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟလများနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တိကျသောနှင့်အပြည့်အဝအတည်ပြုသည့်ရက်စွဲရှိသည်။
မီဒီယာသို့ကုမ္ပဏီမှဖိတ်ကြားချက်များအရ၊ Samsung သည်သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်နယူးယောက်မြို့၌ Unpacked အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် Galaxy Note 23 သည်အလင်းရောင်ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်.
ဂုတ် ၂၃ - Samsung Galaxy Note 23
ယခင်ကစက်တင်ဘာလအထိဒီ terminal အသစ်ကိုလွှတ်တင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေနှောင့်နှေးမှုအကြောင်းပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ အခြေခံအားဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့် Apple flagship နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်၊ လုံခြုံရေးရရှိရန်နှင့်ယခင်ယခင်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများအားထပ်မံမပြောရန်ဖြစ်သည်။ နှစ်။ သို့သော်ရက်စွဲများ၏အကကိုဆက်လက်။ အချို့ကသြဂုတ်လလယ်တွင်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ အချို့က IFA 2017 မတိုင်မီရက်ပိုင်းအတွင်းဘာလင်တွင်တင်ဆက်ခြင်း၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် Note ၏နောက်ဆုံးမျိုးဆက်နှစ်ခုအထိပြုလုပ်ခဲ့သည်နည်းတူသြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ရက်ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရက်စွဲတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Samsung အမှုဆောင်တစ် ဦး အတည်ပြုခဲ့သည် Note 8 ကိုသြဂုတ်လကုန်မှာထပ်မံမသတ်မှတ်ဘဲဖြန့်ချိမယ်။ ဤဗျာဒိတ်တော်အပြီးတွင်၊ Samsung သည် Unpacked 2017 ပွဲသို့ဖိတ်ကြားမှုများကိုစတင်ခဲ့သည် နောက်ဆုံးတော့ကောလဟာလများအားလုံးမှအကြောင်းပြချက်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းပေးသည်။ Samsung ၏ Galaxy Note 8 သည်နယူးယောက်ရှိသြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်.
ဒီပို့စ်ကိုဖိတ်ကြားချက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း၊ Infinity Display ဒါမှမဟုတ် Infinity Display ကိုလက်ရှိအလံရဲ့အဆုံးမဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့အပြာရောင် S-Pen တို့ကထင်ရှားစွာမှတ်သားထားတယ်။ သို့မဟုတ်လက်ဟန်အမူအရာရေးသားခြင်း။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အံ့သြစရာမြားကိုတှေ့ရနျမဟုတျပါ။ Galaxy Note 8 သည်လက်ရှိ flagships Galaxy S8 နှင့် S8 Plus နှင့်အလွန်တူညီပြီးအောင်မြင်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသော Infinity Display ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ပိုမိုကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသော်လည်း၎င်းသည်မှတ်စုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤ terminal မှနောက်ထပ်ဘာများမျှော်လင့်နိုင်သေးသနည်း။
ယခုအချိန်တွင်ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုအများပြည်သူနှင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည့်တိုင်အောင်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်၊ ရှာဖွေနိုင်သမျှသည်ကောလာဟလများ၊ ထင်မြင်ချက်များသာဖြစ်သည်၊ သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်ယုတ္တိရှိပြီးရှင်းလင်းစွာပင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စများတွင်လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုမျက်ခြည်မပြတ်ဘဲ Samsung သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်မပြုမချင်း Samsung Galaxy Note 8 သည်ဈေးကွက်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်လှပစွာဖြင့်ထိတွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ၆.၃ လက်မ OLED မျက်နှာပြင်၊ QHD resolution နှင့်ရှုထောင့်အချိုးအစားအသစ် စျေးကွက်ထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွှမ်းမိုးလာပုံရတယ်။ 18,5: 9.
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ သို့သော် Galaxy Note 8 သည်အခြားရှုထောင့်များအနေဖြင့်လည်းထင်ရှားသည်။ ကင်မရာနှစ်မျိုးတပ်ဆင်သည် နောက်ဘက်မှာ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်လိမ့်မည်ဟု S-Penဒီဇိုင်းနှင့်ကောလာဟလပင်ထွက်ပေါ်လာသည် iris စကင်နာ.
သင့်အတွင်း၌သင်၏နှလုံးသည်နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် Qualcomm Snapdragon ပရိုဆက်ဆာ, အချို့စျေးကွက်များ၌၎င်းကို Exynos ပရိုဆက်ဆာနှင့်ထည့်သွင်းမည်Samsung နှင့်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်သူများတွင်ပုံမှန်ဖြစ်သောဂုဏ်ထူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်၊ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်၊ နောက်ဆုံးအင်္ဂါနေ့၊ Samsung Mobile DJ Koh ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် Galaxy Note 18 ၏ပွဲ ဦး ထွက်ကိုသာမကနောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် terminal အသစ်၏စတင်ရန်အချိန်ဇယားကိုအလွန်အကျွံဖော်ပြခြင်းမရှိပဲဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီအလုပ်အမှုဆောင်၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရ, ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတို့သည် Galaxy Note 8 ကိုပထမဆုံးရရှိမည့်စျေးကွက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်တင်ဘာလတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အောက်တိုဘာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်၎င်းကိုရရှိနိုင်မှုကိုနိုင်ငံများစွာသို့နားလည်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung ၏ Galaxy Note 8 ကိုသြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပွဲထုတ်မည်
ဒီတနင်္ဂနွေပျော်စရာရှိသည်4စိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်း